Maxaad ka ogtahay sheekada Shan ciyaartoy oo dhaawacyo yaab leh ay kasoo gaareen u dabaaldagida gool | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Maxaad ka ogtahay sheekada Shan ciyaartoy oo dhaawacyo yaab leh ay kasoo gaareen u dabaaldagida gool
Posted by: Ahmed Haaddi 2 days ago
Himilo – Dabaaldegga goolka waxa loo malaynayaa inay tahay daqiiqad farxad iyo raynrayn leh, laakiin mararka qaarkood arrimuhu si xun bay u khaldami karaan.
Dabaaldegga goolasha intooda badan waa kuwo aan dhib lahayn, ka fikir salaanta hal-gacan ee Alan Shearer ama tilmaanta caanka ah ee ‘Siuuuu’ ee Cristiano Ronaldo.
Laakin qaar ayaa halis weyn ugu jira qatarta waxayna xitaa keentay in ciyaartoydu ay bilo ku maqnaadaan dhaawac.
Weeraryahankii hore ee Portsmouth Lomana Lua Lua ayaa waqti ka qaatay garoomada ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray cagtiisa xilli uu sameeyay astaantiisii dabaal daga u ahayd kulankii Arsenal 2006dii.
Waxaan dib u milicsanaynaa shan ciyaartoy oo kale kuwaas oo ay soo gaadheen dhaawacyo aan la garanayn oo ka dhashay xamaasaddoodii gooldhalinta kadib.
Steve Morrow Ninka Arsenal waxa uu ahaa geesiga finalkii League Cup 1993 ka dib markii uu goolkii guusha ka dhaliyay Sheffield Wednesday garoonka Wembley, laakiin farxaddaasi ma sii waarin muddo dheer.
Markii ay ciyaartu dhamaatay, kabtanka Gunners Tony Adams ayaa isku dayay inuu garbaha kor ugu qaado geesiga goosha dhaliyay, laakiin kaliya waxa uu ku guulaystay in uu ku rido cawska.
Morrow waxa uu ka jabay gacanta, waxaana loola cararay cusbitaalka isagoo wata maaskaro Ogsajiinta ah xilli saaxiibadii ay qaadayeen koobkii uu ku guuleystay.
Kaliya maahan inuu seegay abaalmarintii billadda, waxaa sidoo kale lagu qasbay inuu ka fariisto finalka FA Cup ee bishii xigtay, oo Arsenal ay sidoo kale ku guuleysatay.
Markii uu u ciyaarayay kooxda reer Switzerland ee Servette sanadkii 2004, Paulo Diogo waxa uu u dabaaldegayay caawintiisa Jean Beausejour .
Markii uu garoonka ku soo laabtay, Diogo waxa uu garan waayay in faraantiga arooskiisa lagu qabtay birta, markii uu ka booday xayndaabka, qayb ka mid ah farta ayaa go’day.
Si ay u sii xumaato dhaawaca dhabta ah, waxa uu markaas qaatay jaale wax uu garsooruhu u arkay in uu yahay waqti lumis, isagoo ku guuldareystay inuu arko waxa ku dhacay farta xiddiga.
Farta Diogo ayaa dib loo toli kari waayay waxaana dhakhaatiirtu ku qasbanaadeen inay gooyaan waxa ka hadhay.
Xiddiga Villarreal Martin Palermo ayaa seegay koobkii adduunka ee 2002 ka dib markii uu u dabaaldegay gool ay ka dhaliyeen Copa del Rey.
Weeraryahanka ayaa waqtigii dheeriga ahaa gool ka dhaliyay kooxda Levante,waxana uu la soo orday si uu ula dabaal dago jamaahiirta markii ay xaaladu noqotay mid fool xun.
Si la yaab leh, darbi yar oo shub ah ayaa ku soo dumay dushiisa oo ka jabay Lugta, isaga oo ka maqnaa muddo lix bilood ah.
Waxa uu ka soo laabtay dhaawac xilli ciyaareedkii xigay, laakiin aad ayay u daahday inuu badbaadiyo riyadiisa Koobka Adduunka.
Ciyaartoy badan ayaa soo gaaray dhaawacyo iyagoo isku dayaya inay sameeyaan dabaaldeg, laakiin qaar badan ma sameeyaan kulankoodii ugu horreeyay.
Weeraryahanka Celestine Babayaro. Daafaca 2.25 milyan ginni joogay ayaa lugtiisa ka jabay xilli uu sameeyay dabaal deg deg deg ah xilli ay isku diyaarinayeen xilli ciyaareedka cusub ee ay la ciyaareen Stevenage wax yar ka dib markii uu ku biiray Chelsea 1997.
Waxa uu saftay kulankiisii ugu horeyay ee tartan bilo ka dib ciyaartii UEFA Cup Winners’ Cup ay la ciyaareen Slovan Bratislava.
Ma cadda in weeraryahanka reer Cameroon ee Joel uu dhab ahaantii dhaawac soo gaaray ka dib dabaal deggiisii kulankii Sao Paolo ee 2014.
Ka dib markii uu shabaqa soo taabtay Coritiba, Joel ayaa u soo orday dhanka garoonka, wuxuuna ka booday xayaysiisyada ka hor inta uusan ku dhicin meel bac saaran oo god cml ah.
Nasiib darro ninka Maritimo hadda u dheela, qofna uma sheegin in uu jiro dalool ku yiilay oo uu calanku qariyey, kaas oo uu si sax ah ugu dhacay. Warka wanaagsani waxa weeye in uu dib u kacay, in kasta oo uu u ekaa mid wareersan.
Previous: Lix ciyaaryahan oo kubbadda cagta ah oo guursaday boqorada quruxda
Next: Toddobada garoon ee ugu daawashada badnaa ee laga diiwaan galiyay taariikhda kubbada cagta